पेट्रोल वा डिजेल कार: तपाईले कुन खरीद गर्नुपर्छ? - Victor Mochere
पेट्रोल वा डिजेल कार: तपाईले कुन खरीद गर्नुपर्छ?
प्रदर्शन र ड्राइभिङ
यहाँ हामी तपाइँ कहाँ चलाउनु हुन्छ, तपाइँ तपाइँको कार कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाइँ यसलाई कुन प्रकारको ईन्धन तपाइँको आवश्यकताहरु लाई सबै भन्दा राम्रो सूट गर्न को लागी प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर हेर्छौं।
a तिनीहरू प्रदर्शनमा कसरी फरक छन्?
परम्परागत रूपमा पेट्रोललाई तीव्र प्रतिक्रिया र रिभ गर्न उत्सुकताको साथ एक सहज ड्राइभको रूपमा हेरिन्छ, जबकि डिजेलमा राम्रो टर्क (तान्ने शक्ति) हुन्छ, जसले थप आरामदायी ड्राइभ बनाउँछ। यद्यपि, आधुनिक टर्बो-चार्ज गरिएको पेट्रोल इन्जिनहरूले धेरै कम-डाउन पावर प्रदान गर्दछ, जबकि पछिल्लो डिजेलहरूले प्रतिक्रिया दिन्छ - र ध्वनि - धेरै पेट्रोल इन्जिनहरू जस्तै। पुरानो कृषि डिजेलको धड्कन लामो समय बितिसकेको छ। दुईलाई सामान्य दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो अझै पनि भन्न सकिन्छ कि:
पेट्रोल इन्जिनहरूलाई उनीहरूको उत्कृष्ट दिनको लागि पुन: परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, त्यसैले तिनीहरू एक 'स्पोर्टियर' ड्राइभिङ शैली अनुरूप छन् - र विस्तारद्वारा, म्यानुअल गियरबक्स
डिजेलहरू स्वचालित बक्सको आराम-ब्याक आकर्षणहरूसँग जोडिएका छन् किनभने सामान्यतया तिनीहरूको राम्रो टर्कले कम गियरहरूमा उच्च रिभ्समा उधारो दिँदैन।
यसको मतलब पेट्रोल इन्जिनहरू आरामदायी हुन सक्दैन वा डिजेलहरू रमाइलो हुन सक्दैनन् भन्ने होइन, विचार गर्न अझै धेरै कुराहरू छन्, त्यसैले चीजहरूमा गहिरिएर हेरौं।
b के तपाईं आफ्नो कार राजमार्ग ड्राइभिङ वा ग्रामीण सडकहरूको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ?
राजमार्गहरूमा डिजेलहरू उत्कृष्ट छन्, जहाँ तिनीहरूको प्रशस्त टर्कले द्रुत ओभरटेक गर्न अनुमति दिन्छ। यसबाहेक, राजमार्ग ड्राइभिङले अरू कतै भन्दा धेरै माइलहरू र्‍याक गर्ने प्रवृति गर्दछ जसको मतलब तपाईं डिजेलको साथ राम्रो हुनुहुन्छ जसले प्राय: राम्रो mpg (kml) फर्काउँछ। राजमार्ग ड्राइभिङले डिजेल कण फिल्टर कायम राख्न आवश्यक ड्राइभिङको प्रकारलाई पनि उधारो दिन्छ - अर्को खण्डमा यस बारे थप। अर्कोतर्फ, ग्रामीण सडकहरूमा ड्राइभिङ गर्दा, पेप्पियर पेट्रोल इन्जिनलाई राम्रोसँग सुहाउने छ, जसले सम्भवतः थप इनामदायी ड्राइभिङ अनुभव प्रदान गर्नेछ र ट्र्याक्टरहरू जस्ता सुस्त सवारीहरूलाई ओभरटेक गर्दा द्रुत गतिको लागि थप उपयुक्त हुनेछ।
ग के तपाइँ सामान्यतया लामो वा छोटो यात्रा ड्राइभ गर्नुहुन्छ?
डरलाग्दो डिजेल कण फिल्टर मुद्दा प्रविष्ट गर्नुहोस्। डिजेल पार्टिक्युलेट फिल्टरहरू (DPFs) ले एउटा जटिल विषयलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ तर बेवास्ता गर्न सकिँदैन र तपाईंले डिजेल कार किन्नु पर्छ वा होइन भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भार थप्छ। समस्याको लामो र छोटो छ, तपाईले नियमित रूपमा 30 र 50 मिनेटको बीचमा उच्च गतिमा डिजेल इन्जिन चलाउनु पर्छ ताकि फिल्टरमा रहेको अतिरिक्त कालिलाई सफा रूपमा 'जलाउन' र सफा गर्नको लागि निकासको तापक्रम पर्याप्त वृद्धि गर्न अनुमति दिनुहोस् - राजमार्ग। ड्राइभिङ यसको लागि आदर्श हो। छोटो यात्राहरू जस्तै पसलहरूमा जाने र जाने, शहरको बारेमा ड्राइभिङको लागि वा यदि तपाईंसँग छोटो वा ढिलो-गतिको यात्रा छ भने, पेट्रोल इन्जिन बढी उपयुक्त हुनेछ। डिजेल लामो यात्राको लागि पनि राम्रो छ किनभने यसको औसत इन्धन अर्थव्यवस्था बढेको छ।
d देश वा शहर ड्राइभिङ?
यदि तपाईंको धेरैजसो ड्राइभिङ शहरमा छ भने, डिजेलको लागि छनौट गर्ने बारे दुई पटक सोच्नुहोस्। स्टप-स्टार्ट ट्राफिकले डिजेल पार्टिक्युलेट फिल्टरहरू (DPFs) बन्द गर्न सक्छ, जसले प्रतिस्थापनको लागि सम्भावित रूपमा ठूलो बिल निम्त्याउँछ। यहाँ नैतिकताको समस्या पनि छ । पुरानो डिजेल इन्जिनहरूले उच्च मात्रामा नाइट्रोजन अक्साइड (NOx) र माइक्रोस्कोपिक कणहरू उत्सर्जन गर्दछ, जुन हावामा रहन्छ र श्वासप्रश्वास समस्याहरू निम्त्याउँछ - शहरहरूमा एउटा विशेष समस्या, जहाँ हावाको गुणस्तर ग्रामीण इलाकाहरूमा भन्दा निकै खराब छ। साथै, यदि तपाइँको अधिकांश ड्राइभिङ देशमा गरिएको छ भने, डिजेलको मांसपेशी टर्क ठाडो पहाडहरू र कठिन भू-भागका लागि उपयुक्त छ, माटो वा हिउँबाट ड्राइभिङ सहित। डिजेल इन्जिनहरू पनि ठूला, भारी सवारी साधनहरू, जस्तै 4x4s, त्यस्ता अवस्थाहरूमा उत्कृष्ट हुन्छन्।
पेट्रोल को लागी राम्रो छ:
डिजेल को लागी राम्रो छ:
पहाडी ग्रामीण इलाका ड्राइभिङ
रस्सी र व्यावसायिक प्रयोग
जबकि त्यहाँ धेरै भावनात्मक कारकहरू छन् जस्तै ड्राइभिङ रमाइलो वा हरियो जाने: धेरैको लागि, यो निर्णय लागतमा आउँछ। यहाँ हामी पेट्रोल र डिजेल कारहरूसँग सम्बन्धित सबै लागतहरू जाँच गर्छौं, कारको माथिल्लो मूल्यदेखि बीमा, कर, इन्धन अर्थव्यवस्था, सेवा लागत र अवशिष्ट मूल्यहरू।
a प्रारम्भिक खरिद लागत
डिजेल कारहरू सामान्यतया किन्नको लागि तिनीहरूको पेट्रोल बराबरको मूल्य भन्दा बढी हुन्छ। डिजेलको उच्च लागत आंशिक रूपमा उत्सर्जन परीक्षणहरू मार्फत प्राप्त गर्न आवश्यक अतिरिक्त प्रविधिको कारण हो। यद्यपि, यो पनि किनकी खरिदकर्ताहरू थप तिर्न तयार छन् - पछि लागत फिर्ता गर्ने आशामा।
डिजेल कारहरूको उच्च खरिद मूल्य, उच्च दुर्घटना मर्मत लागतको साथमा, बीमा लागत बढ्न सक्छ।
ग कार कर
केही क्षेत्राधिकारहरूमा, डिजेल कारहरू कार्बन डाइअक्साइड (CO2) उत्सर्जनको आधारमा कर लगाउन वा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।
एक लिटर पेट्रोलको पम्प-मूल्य सामान्यतया कम हुन्छ, तर यो समान उत्पादनको पेट्रोल एकाइहरू भन्दा धेरै डिजेल इन्जिनहरूको बढ्दो दक्षताले ओगटेको छ। छोटकरीमा, यसको मतलब अधिक mpg (kml)। अर्थतन्त्रमा यो भिन्नता ठूला सवारी साधनहरूमा बढी स्पष्ट हुन्छ, जस्तै लक्जरी SUV, जहाँ डिजेल सामान्यतया पूर्वनिर्धारित विकल्प हो।
e सेवा लागत
यहाँ मिश्रित तस्वीर छ। डिजेल इन्जिनहरूमा लामो समयसम्म सर्भिसिङ अन्तरालहरू हुन्छन्, तर तिनीहरूको थप जटिलताले लागत बढाउन सक्छ - विशेष गरी यदि DPF प्रतिस्थापन आवश्यक छ भने। धेरै आधुनिक डीजलहरूको लागि, तपाईंले इन्धन additive को लागतमा थप्न आवश्यक छ। यो डिजेल कारहरू द्वारा चयनात्मक उत्प्रेरक कटौती (SCR) उत्सर्जन प्रणालीहरू प्रयोग गरिन्छ। हामी वारेन्टी बाहिर उच्च माइलेज डिजेल कार किन्न बारे दुई पटक सोच्नेछौं; उच्च ग्यारेज बिलहरू द्वारा पम्पहरूमा कुनै पनि बचत चाँडै मेटाउन सकिन्छ।
f अवशिष्ट मानहरू
डिजेल कारहरू जुन किन्नको लागि बढी मूल्य हुन्छ तिनीहरू पुन: बेच्दा सामान्यतया समान प्रतिशत बढी मूल्यवान हुन्छन्।
सस्तो इन्धन प्रकार
प्रारम्भिक खरिद लागत
पेट्रोल वा डिजेल बहसमा निश्चित निर्णय दिन सम्भव छैन, किनकि निर्णय ड्राइभर र उनीहरूले आफ्नो सवारी कसरी प्रयोग गर्छन् भन्नेमा निर्भर छ। यद्यपि, हामी आशा गर्दछौं कि हामीले यस लेखमा दिएका सल्लाहहरूले तपाईंलाई सूचित निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ। माथिका सबै मापदण्डहरू हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ र आफ्नो ड्राइभिङ आवश्यकताहरू के हो र तपाइँ तपाइँको खरिद गर्नु अघि तपाइँ तपाइँको गाडी कसरी प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सावधानीपूर्वक विचार गर्नुहोस्। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, मिडियाको कथित 'डिजेलमा युद्ध' द्वारा पेट्रोल किन्नको लागि धम्की नदिनुहोस्।
हावाको गुणस्तरको बहस राम्रोसँग फ्याक्टरिङ गर्न लायक छ, यो अझै पनि तपाइँका सबै विकल्पहरू तौल गर्न सल्लाह दिइन्छ, तपाइँले खरिद गर्न छनौट गर्नु अघि, तपाइँ के ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पूर्व धारणा बिना माथिका सबै कारकहरू हेर्दै। सामान्य नियमको रूपमा, सानो, मध्यम आकारका कारहरू वा स्पोर्ट्स कारहरू किन्दा धेरैजसो मानिसहरूले पेट्रोल इन्जिनलाई रोज्छन्, र ठूला कारहरू र SUVहरू किन्दा अधिकांश मानिसहरूले डिजेललाई रोज्छन् किनभने प्रत्येक इन्जिन सामान्यतया यी प्रकारका लागि उपयुक्त हुन्छ। कारहरूको।
यद्यपि, हाइब्रिड र प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाडीहरू जस्ता आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै, कारको विशिष्ट मेक र मोडेल र हामीले माथि हेरेका अन्य कारकहरूको दायरामा धेरै निर्भर गर्दछ। तपाईले गर्नुहुने ड्राइभिङको प्रकारलाई सावधानीपूर्वक विचार गर्नु र छनौट गर्नु अघि विशेषज्ञको सल्लाह लिनु पहिले भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
पेट्रोल र डिजेल कारहरू बीच छनौट गर्दा 'गणितहरू गर' भन्ने अभिव्यक्ति एकदमै उपयुक्त छ। पेट्रोल कारहरू किन्नको लागि सामान्यतया सस्तो हुन्छन् र तपाईंले पम्पहरूमा एक लीटर अनलेडेडको लागि कम तिर्नु हुनेछ। डिजेलले राम्रो इन्धन अर्थव्यवस्था (सामान्यतया पारिवारिक कारमा 15-20mpg (6.4-8.5kml)) र कम कार कर प्रदान गर्दछ। समग्रमा कुन लागत कम हुन्छ मुख्यतया तपाईले कार कति समयसम्म राख्ने योजनामा ​​निर्भर गर्दछ।
क्रूज नियन्त्रण कसरी प्रयोग गर्ने